We Love Cele – Page 294 – We Love Cele
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာမလုံဖြစ်လာတဲ့ အတွက် ဒီဗီဒီယိုကို တင်လိုက်တာပါ ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်ဗို
ကျော်ကျော်ဗိုလ်ဟာ မနေ့ညနေပိုင်းလောက်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေပြီး ကျတော်ရှက်လို့ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ တင်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ကြည့်ရှုသူတွေကြားတဟုန်ထိုးပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ယိုယွင်းနေတဲ့ အနေအထားတွေကို အကုန်ထောက်ပြသွားတဲ့ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့တထပ်တည်း ထပ်တူကျနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။...
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ acticvity Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Running Man အစီအစဉ်ဟာ တောင်ကိုရီးယား၊ နိုင်ငံသာမက အာရှ ပါမကျန် ယူရိုတွေထိ နာမည်ရလာတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လူကြိုက်များတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သလို Running Man...
Makeup Artist ဟန်နာယူရီကတော့ လက်တလောမှာ ခရီးတွေထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပေါက်လေးနဲ့ အသားဖြူဖြူလေးကြောင့် ကိုရီးယားမလေးနဲ့တူလွန်းလှတဲ့ ဟန်နာယူရီကို ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်ခင်သဘောကျကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို သူမလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တင်လေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဟန်နာယူရီကတော့ အဆိုတော် ဘန်နီဖြိုးနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်အတော်ကြာ...
Myanmar Idol Season3ရဲ့ Winner ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုရှင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့က စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကြော်ငြာအတူ ရိုက်ကူးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့...
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရတ်ဌာနီခရိုင် ခိုတောင်ကျွန်း ခေါ် လိပ်ကျွန်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံရသူ မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးဘက်ကနေ တရားမျှတမှုရရှိရေး ဖြစ်ရပ်မှန်သဲလွန်စတွေ ဆွဲထုတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့...
နိုင်​ငံ​ကျော်​ Beauty Blogger ​နေခြည်​ဦးဟာ မိတ်​ကပ်​လိမ်းခြယ်​ယုံသာမကပဲ အခုဆိုရင်​ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီး​တွေနဲ့ ​ကြော်​ငြာအ​မြောက်​အများမှာ သရုပ်​​ဆောင်​​နေရပါပြီ။ ​သွက်​သွက်​လက်​လက်​ ချက်​ချက်​ချာချာနဲ့ ​ပေါင်းသင်းဆက်​ဆံ​ရေးအလွန်​​ကောင်းတာ​ကြောင့်​ ​နယ်​ပယ်​အသီးသီးမှ ပညာရှင်​​တွေမဲ့ သိကျွမ်းပြီး အနုပညာရှင်​​တော်​​တော်​များများနဲ့လဲခင်​မင်​ရင်းနှီးပါတယ်​။ ပွင့်​ပွင့်​လင်းလင်း​ပြောဆိုတတ်​တဲ့ သူမရဲ့ပုံ​စံ​လေး​ကြောင့်​ အား​ပေးသူ မိန်းက​လေးပရိသတ်​အခိုင်​အမာရရှိထားသူလဲဖြစ်​ပါတယ်​။...
ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီကတော့ ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာ အပြုံးမပျက် လက်တွဲခဲ့တာ ဆိုရင် Anniversary တောင် ရောက်လို့ လာခဲ့ပါပြီ။ နှစ်ဦးသားကတော့ အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ အမြဲလိုလို ချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့ ပုံလေးတွေ ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရွှေမှုန်ရတီက “Surprise လာလုပ်သူ...
ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်မြင့်မြတ်ဟာ ယခုအချိန်မှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဆင်းရဲဖူးလား ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းစကားတစ်လုံးနဲ့ သူ့ရဲ့ ပီပြင်တဲ့ အိုက်တင်တွေကို ပရိသတ်တွေ အပြည့်အဝ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကူးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင့်မြတ်ဟာ အဆိုပိုင်းကိုသာ အထူးတလည်စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး...
ဒီမေးခွန်းဟာ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းစေတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ငွေတစ်သိန်းကျပ်ကို လဆန်း ၅ရက်အတွင်း ဘဏ်မှာအပ်မယ် လကုန်ရက်အထိ မထုတ်ဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် အတိုးငွေ ၆၆၆ ကျပ်လောက်ရပါမယ်။ သိန်း တစ်သောင်းအတွက်တော့ ၆၆သိန်းကျော်အတိုးပေါ့။အကယ်၍များ လဆန်း ၅ရက်ကျော်မှ အပ်မိတယ်။...
အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကျော် ထိပ်တန်းမင်သားကြီးလွင်မိုးရဲ့ သမီးချောလေး ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ပရိတ်သတ်တွေချစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ယွန်းဝတီလွင်မိုးကလည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုခံထားရတဲ့ သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာဟန်ပန် အမှုအရာလေးတွေရယ် အပြုံးလေးတွေကလည်း ယောကျာ်းလေးပရိတ်သတ်တွေကိုကြွေစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းလေးကတော့မကြာသေးခင်အချိန်ကမှ သားလေး Liam ရဲ့ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို ထုတ်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာ သားလေး...
Page 294 of 303 Prev 1 … 293 294 295 … 303 Next